true conditions /zu-ZA/tools-for-life/conditions/steps/survival-and-ethics.html read 19 21 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/conditions_zu_ZA.jpg Ukuziphatha neZimo
19.‎1 FUNDA LENDATSHANA
Isimo esiphansi kakhulu Yisimo Sokudideka.
Esimweni Sokudideka, umuntu noma indawo izoba sesimweni sokunyakaza okungahleliwe. (Uma kwenzeka into engahleliwe ayilawulwa futhi ayihlelwanga.) Esimweni Sokudideka, ngeke kube nokukhiqizwa kwangempela, ukudideka noma nokungahleleki kuphela.
Ukuze umuntu aphume Ekudidekeni, umuntu kumele azitholele ukuthi ukuphi.
IFomula Yokudideka yile:
Thola ukuthi ukuphi.
Qaphela: Kubalulekile ukuthi umuntu Osekudidekeni aziswe ngencazelo yokudideka. (Lokhu kwenziwa ngaphambi kokuba ifomula uqobo iqalwe.)
Noma yiziphi izimo ezingabonakali zingaxazululeki ngokushesha.
Ukudideka ukunyakaza okungahleliwe.
Uma ubungama kuthrafikhi eningi, ubungazizwa udidekile yikho konke ukunyakaza okunyakazisa okuzungezile. Uma ubungama esivunguvungwini esinamandla esinamaqabunga namaphepha kundiza, ungahle uzizwe udidekile. Ukudideka ukudideka kuphela uma nje zonke izingcezu zihamba. Ukudideka kuwukudideka kuphela uma nje ingekho ingxenye yalokho kuchazwe ngokucacile noma eqondakalayo.
Abantu abangakwazi ukulawula “okungahleliwe” bangabhekana nokudideka. Abantu abangakwazi ukulawula izinto empeleni badala ukudideka okwengeziwe.
Konke ukudideka ukuthi, ukugeleza okungenayo iphethini (ngendlela ehlelwe ngayo). Izingxenye ezithinteka ekudidekeni ziyashayisana, zihlangane zihlale endaweni. Awukho umkhiqizo, njengokuthi ukuba nomkhiqizo okuthile kufanele kuphume.
Isibonelo, thatha indoda elungisa izimoto ekulesi Simo Sokudideka. Akakwazi ukuthola noma yiziphi izingxenye ezintsha zemoto ngoba indawo yakhe yokusebenzela ayihlelekile, akakwazi ukuthola amathuluzi akhe noma isando sakhe ngoba akazi ukuthi uwabeke kuphi. Uchithe u-oyile kuwo wonke amaphepha akhe, ngakho akazi ukuthi yini okudingeka yenziwe nangezimoto esitolo sakhe semoto. Azikho izimoto ezilungiswa bese zibuyiselwa kumakhasimende.
Njengesinye isibonelo, isisebenzi sasehhovisi esiseSimweni Sokudideka senza isenzo sokubhala incwadi sithathe izinsuku ezimbili esikhundleni semizuzu eyishumi nanhlanu. Uphula ikhompyutha yakhe, akakwazi ukuthola iphepha, akanayinki wokuphrinta, ulahlekelwa ikheli lomuntu futhi kufanele athenge ezinye izitembu. Khonamanjalo, ayikho enye incwadi yakhe ephumayo njengoba esazama ukuthumela eyokuqala.
Ifomula eyengeziwe yeSimo Sokudideka yile:
Thola i-Locational endaweni lapho ukhona.
(I-Locational iyenziwa ngokuhamba nomuntu, ngaphakathi nangaphandle, bese uthi: “Bheka leyo [into].” Lapho umuntu enze kanjalo, mamukele ngo-“Ngiyabonga” noma “Kulungile” noma “Kuhle.” Sebenzisa izinto ezinjengesihlalo, isihlahla, imoto, phansi, uphahla, indlu, njll. Umuntu ogijimisa i-Locational angakhomba entweni ngaso sonke isikhathi. Kwenziwa kuze kube yilapho umuntu ekhanya futhi ebona okuthile noma enokuqonda okusha ngempilo yakhe.)
Ukuqhathanisa ukuthi ukuphi kwezinye izindawo lapho wawukade ukhona.
Phinda isinyathelo sokuqala.